WARSHAD CASRI AH IP-16 OO KELI AH: DIB-U-EEGIS, SHARAXAAD KA MID AH ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Waxaa jira noocyo digaag ah, sida, tusaale ahaan, quruxda quruxda badan ee Nederlandka ah ee qaboojiyay, kuwaas oo shaqeynaya haweenka uurka leh mana rabaan in ay ukumeeyaan. Digaagga kale waxay isku dayayaan inay si daacad ah u gutaan waajibaadkooda waalidnimo, laakiin duruufaha dibadeed ayaa faragelinaya. Sidaa daraadeed qofka ayaa soo bandhigay habka wakhti go'an oo sidaas awgeed si weyn u kordhiyay dadka digaaga ah, oo hadda ka badan saddex jeer tirada dadka ku nool meeraha. Maantana waxaa jira noocyo badan oo ah iskuboorayaal oo idil, qaabab iyo shaqooyin. Qalabkaas waxaa ka mid ah kuwa aad u horumarsan.
Istaraatijiyadaha warshadaha ee Stimulus IP-16 waa cutub loogu talagalay in lagu daro ukunta dhammaan shimbiraha xiisaha beeraha. Waxay ka kooban tahay qolal xiran oo ka mid ah jihada udub-dhexaadka ah, oo ay gacanta ku hayaan hal barnaamij oo ah nidaam toos ah oo lagu xakameynayo xaddidaadyada maskaxda.
Si aad u isticmaasho beerta, fiiro gaar ah u yeelo "Remil 550TsD", "Titan", "Stimulus-1000", "Laying", "Laying Perfect", "Cinderella", "Blitz".
Guud ahaan, isweydaarsiga ayaa loo qaybiyaa:
ka hor ama ka diboo ay ukuntu ku socoto geeddi-socodka maskaxda illaa ay tuugadu ka soo baxaan qolofka;
dillaachalkaas oo digaagga laga sii daayo qolofka oo la sii daayo;
isku darkaoo labada hababba ay ka jiraan qolal kala duwan.
"Stimulus IP-16" waxay ka tirsan tahay nooca hordhaca ah ee wacyigelinta, taas oo ah, waxaa loogu talagalay in lagu soo koobo ilaa muuqaalka muuqaalka dhalinyarada, taas oo horayba u dhacdo kulubo kale. Waa armaajo ballaaran oo leh kuleyl, nalalka, hawo-qaadashada, oo ay ku jiraan baayalaha ukunta waxaa lagu dhejiyaa meelo gaar ah, oo loo yaqaan "carts".
Intaa waxaa dheer, naqshaduhu ma sameyn karo iyada oo aan:
qalabka korjoogteynta iyo xakamaynta heerkulka hawada;
qalabyada ilaaliya qoyaanka la rabo iyada oo loo marayo humidifiers;
habab wareeg ah oo loogu talagalay gawaarida ukunta.
Tilmaamyada tusaalahan waxaa ka mid ah:
suurtagalnimada in ay ku shaqeyso qaab halmar ah, taas oo, si kastaba ha ahaatee, u ogolaato qashir-reebka ukunta;
awooda unugta inay ka kooban tahay kooxo ka soo gala tiro kamarad ah;
joogitaanka naqshadeynta afar carbuuneed ee kulul, oo leh hawlgal ah in lagu rogo tareemada.
Tilmaamahan waxaa lagu soo bandhigay magaalada Pushkin ee gobolka Moscow oo ay samaysay cilmi baarista iyo wax soosaarka Stimul-Ink, kaas oo horay u soo galay sumcadda suuqyada isagoo u shaqeynaya sumcad wanaagsan oo ah qalabka beeraha, oo lagu kala saaro tiknoolojiyada cusub iyo tayada fulinta.
Ma taqaanaa? Inkasta oo digaagga ay si degan u daadanayaan iyada oo aan joogin xayawaanka bulshadooda, hase yeeshee, badeecadani maahan mid ku habboon kuleylaha. Ukunta ukunta oo dhan ayaa la heli karaa oo kaliya marka la eego ka qaybqaadashada habka qulqulka.
Isku-xidhkaani waa naqshad cajiib ah oo miisaankeedu yahay ku dhawaad ​​tuun, ama halkii, 920 kg. Waxaa intaa dheer, cabbirada waxaa lagu gartaa:
2.12 m ballaaran;
qoto dheer oo ah 2.52 m;
2.19 m sare
Inkastoo ay ka kooban tahay qalab badan iyo qalabyo isticmaala korantada, waaxdan, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay awood guud oo keliya 4.6 kW.
Isku-dhafkan ayaa awood u leh in uu la qabsado marxaladda ukunta:
boodhadh - 39680 gogo ';
ducks - 9360 gogo ';
Inkasta oo cutubku isticmaalo nidaamka rikoodhada hal mar, wuxuu si fiican u isticmaali karaa habka loo kordhiyo ukumaha ukunta.
Baro sida loo kobciyo digaagga, ducklings, poults, goslings, haadda guinea, quailes, indoutiat.
Si loo kobciyo si guul leh u guto hawsheeda ugu weyn (kulubka), dhammaan hawlaha kale ee wadarta guud waa in la isku duwo, si cad oo waxtar leh:
Kaliya hal kombiyuutar oo leh barnaamijkiisa ayaa maamuli kara shaqada dhammaan qolladaha kulliyadda, kaas oo fududeeyay nidaamka xakamaynta la socdo iyo xakamaynta xakamaynta qaabka tooska ah. Dhammaan macluumaadka laga helo hawlaha nidaamyada cutubka waxaa isla markiiba la farsameeyaa, la diiwaangeliyaa oo lagu muujiyaa kormeerka kombiyuutarka qaabka jaantusyada iyo jaantusyada, taas oo kuu ogolaanaysa inaad kormeer ku sameysid gobolka oo dhan.
Nidaamka qaboojinta oo ka kooban radiator leh laba wareeg, qalabka solenoid wuxuu xakameynayaa socodka biyaha waxayna xakameysaa habka qaboojinta oo dhan.
Saddex kuleyliye korantada tuubada ah, oo laga ilaaliyo dhoobo by dhejis gaar ah, samee nidaam kuleyl ah kaas oo bixiya heerkulka ugu fiican ee horumarinta buuxda ee embriyaha ee ukunta.
Nidaamka diidmadu wuxuu hubiyaa in laysku furo ukunta ilaa 45 digrii, taas oo dammaanad qaadaysa habka caadiga ah ee geedi-socodka.
Haddii heerkulka hawada ee qolka uu kor u kacayo 38.3 digrii, habka sarrifka hawada ayaa hoos u dhigaya heerkulka, marka la barbardhigo is dhaafsiga hawada lagama maarmaanka ah ee deegaanka.
Qoyaan ku filan oo ku yaal qolka waxaa lagu gaari karaa iyada oo uumi bixinaysa biyaha oo ay bixiso qulqulka.
Waxaan la yaabanahay sida loo sameeyo isugeynta dabiiciga ah ee ukunta.
Tayada wanaagsan ee modelka "Stimulus IP-16" waxaa ka mid ah:
kartida si toos ah loogu rogo tareemada;
shuruudaha adeegga xakamaynta nabdoonaanta;
xakamaynta saxda ah ee bayoolojiga, ka takhalusida caabuqyada ukunta;
xakamaynta fogaanta geedi socodka iyada oo loo marayo kombiyuutar fudud;
qummanaanta habeynta hawada, qolalka kuleylka iyo qaboojinta;
La qabsashada wanaagsan ee jidhka oo ka kooban nidaamyo loogu talagalay meeleynta ugu wanaagsan ee ukumaha, iyada oo aan loo eegin cabbirkooda;
adkeysiga iyo xidhashada kiisaska;
rakibidda fudud ee cutubka;
suurtogalnimada in wax laga bedelo nidaamka hawo-gelinta iyadoo ku xiran shuruudaha isticmaalaha.
Iyadoo la eegayo dib u eegista, ma jiraan wax khasaare ah oo ku yimid qaabkaan. Cabashooyinka qaarkood ayaa marmar la kulmaa hawlgalka habka xakamaynta heerkulka elektarooniga ah.
Inkasta oo dayactirka qalabku aysan keenin dhibaatooyin gaar ah, qaliinka saxda ah wuxuu wali u baahan yahay ilaalinta qawaaniinta qaarkood, kuwaas oo inta badan lala xiriiriyo qiyamka dhalashada nolosha cusub ee ukunta naafada ah.
Ma taqaanaa? Si aad u karsato ukunta dufanka adag, waa in la kariyaa 2 saacadood.
Habka loo diyaarinayo cutubka loogu talagalay in la isugeeyo waxay u muuqataa mid caadi ah, midaysan oo inta badan aan loo baahnayn. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii, marxaladdan geedi-socodka hagiddu waxaa lagu dhisay khaladaad badan, kuwaas oo ku salaysan qiyaasta marxaladda diyaarinta.
Maanta, xeerarka guud ee la aqbalay ee loogu talagalay diyaarinta digaagga qalabka loogu talagalay hawlgalinta digaagga ayaa ka kooban dhawr tallaabo:
Qalabka iyo jeermi-dilka qalabka gudaha iyo dibadda. Hawlgalkan waa in la sameeyaa ka dib marxalad kasta oo kabadan.
Dejinta qoyaanka ugu wanaagsan ee qolalka. Heerka qoyaanku wuxuu ku xiran yahay shimbirta ay ukuntu ku jiraan dhirta. Tusaale ahaan, digaagga mustaqbalka waxay ubaahan yihiin 50% qoyaan, laakiin waa in la yareeyo 80% horeyna uumiga iyo qoyaanka.
Dejinta xuduudaha heerkulka oo ku kala duwan waqtiyada kala duwan ee maskaxda.
Diyaarinta uumiinta ukumaha, oo ku dhejisid saxanka, ka dibna - qolka cusub oo nadiif ah, nadiif ah, oo ku saabsan cabbirka isku midka ah ee qolka lebiska.
Natiijada ugu dambeysa waxay sidoo kale ku xiran tahay waqtigeeda iyo si haboon oo loo dhigo ukumaha ku jira masraxa. Oo halkan sidoo kale waxaa jira sharciyo adag:
Ukuntu waxaa loo dhigi karaa si siman ama si siman. Goobta dambe waa qasab in ukumaha shimbiraha ah ee shimbiraha sida dhoobada ama turkey.
Ukumaha digaaga waxaa lagu dhejiyaa qaboojiyaha oo leh gawaarida gawaarida lagu riixo, sida "Stimulus IP-16".
Waxaa lagu talinayaa in buug kasta oo lagu magacaabo in uu doorto badeecad isku mid ah.
Marka aad dooratid buug diiwaangashan, waxaa faa'iido leh inaad isticmaashid aragti dheer. Saliida ukunta waxaa lagu xakumay gacanta.
Ka hor intaan la dhigin ukunta, waa in lagu nadiifiyaa nalka ultraviolet.
Sidoo kale ka hor intaan la saarin waa lagama maarmaan in la ilaaliyo alaabta wax lagu buuxiyo qol leh heerkul ah 25 digrii.
Ka hor inta aanad soo saarin ukumo-kululeeyaha waa in la hor mariyaa.
Waa muhiim! Ha dhigin ukumo kulul qaboojiye. Tani waxay keeni kartaa in mareegaha ku jira qolofka inay noqdaan kuwo isku xidhan, tani waxay keeni doontaa dhibaatooyin ku yimaada horumarka dambe ee embriyaha.
Nidaamka is-qaboojinta laftiisa ayaa sidoo kale ku xiran xeerar gaar ah oo si toos ah u saameeya guusha natiijada kama dambaysta ah, taasoo awood u leh inay 95% ka gaarto IP-16 Stimulus.
Hawlaha hordhaca ee horudhaca waxay ka kooban tahay saddex talaabo oo waaweyn:
Marxaladda koowaad Wuxuu soconayaa 6 maalmood, inta lagu gudajiro heerka qiyaasta qiyaasta 65%, heerkulka waxaa lagu hayaa inta u dhaxeysa 37.5 iyo 37.8 degrees Celsius. Ukumaha duuban ayaa la rogaa lix ama siddeed jeer maalintii.
Marxaladda labaad ee kuleelka waxay u dhexeysaa 7 ilaa 11 maalmood. Waqtigaa, qoyaanka waxaa la yareeyey 50%, heerkulku si joogta ah waa loo ilaaliyaa 37.5 ... 37.7 digrii. Ku soo noqoshada saxda ah ee kamaradida waxaa lagu sameeyaa isku celcelis isku mid ah.
Marxaladda saddexaad ee isugeynta wuxuu soconayaa 12 ilaa 18 maalmood. Heerkulka inta lagu jiro mudadaas ayaa hoos u dhacaysa ilaa 37.5 digrii, qoyaankana, dhanka kale, wuxuu kordhiyaa 75%, kaas oo lagu gaarey buufinta tufaaxada ka soo baxa. Maalinta 18-aad, ukunta waxaa loo wareejiyaa isugeyntii Stimulus IV-16 hatchery.
Waa muhiim! Dhexdhexaadyada inta u dhaxaysa laabashada tufaaxa ku jira masawiradu waa inaysan dhaafin 12 saacadood. Ma yaabsan tahay in hen ee buulka ee hudheelka hen ayaa ukunta ukunta qiyaastii saacad kasta.
Iyada oo faa'iidooyin badan oo aan faa'iido lahayn ee ku saabsan Istuudiyaha Stimulus IP-16 ee kor ku xusan, qiimaha suuqa sicirka 9,5 kun oo doolar (qiyaastii 250 kun UAH ama 540 kun oo doolar) ayaa loo tixgelinayaa mid la aqbali karo.
Baro sida loo sameeyo xashiishka, iyo sidoo kale heer-kuleylka gacmahaaga.
Haddii aad raacdo dib-u-eegista shaqada ee buug-yarahan, ka dibna waxa loo qaybin karaa laba qaybood:
Isticmaalayaasha isticmaalaya qalabka loogu talagalay warshadaha, xusuuso dhaqsaha si dhaqso ah u noqosho-qaboojiyaha, tayada, kalsoonida iyo heer-sare oo otomaatig ah.
Fikrad ka soo hor jeedda kuwa iibsaday unugga isticmaalka guriga. Waxay ka cabanayaan xooggooda sarreeya ee tamarta, taas oo lagu muujinayo isticmaalka badan ee korontada iyo biyaha, iyo sidoo kale - bulkiness.
Laga soo bilaabo tan waxaa la soo gabagabeyn karaa in Stimul IP-16 ay si fiican u la socdaan shirkado waaweyn oo digaaga ah iyo beeraha waaweyn, laakiin looguma talogelin inay beeraha miyir-dhaqameedka leh.
Isticmaalka casriga casriga "Stimul IP-16" waa mashiin caqli-gal ah oo si deg-deg ah, si cad oo macquul ah wax uga qabata baahiyaha nolol cusub oo abuuraya xaalado aan fiicnayn.
Dib-u-eegista Qormooyinka Stimulus Inc
Mar labaad, santuuq ka timi Stimulus Inc. ma aysan niyadjabin Horumarka ugu horreeya ee xilli-ciyaareedka.
Waxaan taageersanahay dmitrij68. Waxaan ku jiray bandhigyo kala duwan oo beereed ah, waxaan odhan doonaa hal shay, dhammaan kulubiyeyaasha noocan oo kale ah waxay ka mid yihiin tayada dhismaha isku mid ah, iyo dhiirigelinta, inkastoo dhammaan cilladaha, shaqeeyaan oo aan si xun u shaqeynin. Hase yeeshee, haddii aad ukun u dhigtid 250 tr, markaa waa nacas ah inaad ku tiirsanaato qalabka kaliya, waxaad u baahan tahay inaad haysato bmi stock, heerkulka iyo qoyaanka, wax walba oo kale waa dukaanka qalabka korontada.